izinguquko sokugembula kule mithambo, okungukuthi, isandiso zabo - into evamile. Isizathu ngoba ukugeleza reverse igazi, engesiyo ngokuvamile ejwayelekile izitsha neuropathy. Reflux - ngakho ukubiza lesi simanga - kancane kancane kuholela nobunzima outflow wegazi emithambo yegazi, ukubonakaliswa yokujama tsi, abampofu esitho izicubu umoya-mpilo umncane. Lezi zici zibulale imithambo yegazi, ngemithambo emikhulu nemincane emilenzeni kancane kancane balahlekelwa kuyaqina izindonga zawo, welulela futhi zikhubazekile.
Isifo esibangelwa lezi zinguquko ngokuthi varicose emithanjeni. Inkinga ukuthi ukususa ngemithambo emikhulu nemincane emilenzeni nge varicose, ikakhulukazi ukunakekelwa abesifazane, ngoba emithanjeni zibonakala kakhulu, ukudala i ukungakhululeki yobuhle. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile bakhathazekile ubuhlungu, ukuba ndikindiki, amajaqamba, ukusinda imilenze. Ngu ubunjalo ukugeleza varices kungaba samabanga aphansi noma, isifo kungelashwa, kungaba ithuthuke futhi kubangele ukushisa noma ukwakheka izilonda trophic.
varicose emithanjeni on the imilenze, ngokuvamile ahole isiguli emtholampilo, iziguli afikelwa ukwesaba, uyaqiniseka ukuthi udokotela kutawugcizelela kokungenela ngokushesha. Eqinisweni, eminyakeni 10-12 kuphela edlule, futhi inkulumo yayingekhona ukuthi lowo ngemithambo emikhulu nemincane emilenzeni, okuyinto ukwelashwa zenzeka ngokusebenzisa ukubhucunga nokunyakazisa umzimba, nginyamalale futhi ayisekho kabi. I impumelelo yesayensi yanamuhla avunyelwe Phlebology besebenzisa amasu ezikhethekile okuphulukisa iziguli ezine varices, futhi ngesikhathi esincane kakhulu isikhathi. Yiqiniso, isinqumo izindlela ezingcono ukuthonya isifo kuthatha udokotela emva izifundo ezifanele.
Phatha ngemithambo emikhulu nemincane emilenzeni ikakhulu kancane amasu koda ehilela ukwelashwa olukhulu ngaphandle ukuhlinzwa. Ezigulini kubaluleke kakhulu ukuthi ukwelashwa wenziwa ngaphandle ukubulawa kwezinzwa okuvamile futhi yi yesiteleka - kusukela emithanjeni iziguli ungashiyi ngokuphelele noma yimiphi iminonjana.
izindlela zesimanje ekwelapheni umlenze emithanjeni
Okokuqala-ke sclerotherapy usebenzisa carbon dioxide. Foam sclerosant kwakhiwa ne-carbon dioxide, is injected emthanjeni, ukugeleza kwegazi eyeka ke bese esenza sibe ngentambo fibrous ukuthi ancibilikisa ngokuhamba kwesikhathi. Sebenzisa le ndlela kungaba, kungakhathaliseki ukuthi hlobo luni ngemithambo emikhulu nemincane emilenzeni ehlaselwe varicose.
Eyesibili indlela - kokukhipha emithanjeni usebenzisa laser. Futhi uyakwazi ekususeni emithanjeni onesifo ngaphandle ukumhlinza. Le ndlela isekelwe isenzo enamandla laser ishayela ku igazi esitsheni. Lokhu kuholela coagulation ka vein futhi Ukuvalwa wako.
omunye ngezihloko, okuvumela ukuba aphathe ngemithambo emikhulu nemincane emilenzeni, futhi ablation radiofrequency, okuyinto indlela imiphumela ezishisayo phezu Izindonga zangaphakathi imithambo yegazi. Inqubo ngokufaka ku mafutha anciphisa isikhala esingaphakathi we electrode vein main. Ukuchayeka emisebeni kagesi kuholela ukudalwa lokushisa eliphezulu ngo vein (85 degrees) edala Ukuvalwa yayo. Ukwelapha nge laser ablation kungaba yisiphi emithanjeni ubukhulu. Izibuyekezo iziguli ungafunda mayelana ngempumelelo nengebuhlungu inqubo.
Jaundice - Iyini? Jaundice: Izimbangela, Sifo Nokuselapha
Broken emhlathini zidinga ukwelashwa eziyinkimbinkimbi
Kuvele iqiniso elithakazelisayo ngale ezincelisayo. Amaqiniso ethakazelisayo carnivores, izinambuzane
Le mikhiqizo njalo ekhona odokotela Ukudla
Cold on the izindebe, ukwelashwa nge yokugcoba, si futhi mulled iwayini
Ukuya Novokuznetsk: Indawo yokudlela - ukukhetha ethandwa
Izesekeli black ingubo: izinketho besproiryshnye kakhulu
Iminyango laminated: ukubuyekezwa. iminyango ingaphakathi laminated
Lokuphakamisa Sexy abaneziqu
Volgograd Technical University (Volgograd State Technical University)
Ithebhulethi yokuphela kwe-lactation: uhlu nokubuyekeza